प्रथम समृद्धि गोरिल्लाज बास्केटबल प्रतियोगीता सम्पन्न – Maitri News
काठमाडौँ । समृद्धि स्कुलद्वारा आयोजित प्रथम समृद्धि गोरिल्लाज ३ह३ बास्केटबल प्रतियोगीता स्कुलको बास्केटबल मैदान बालाजुमा सम्पन्न भएको छ । दुईदिन चलेको उक्त प्रतियोगीतामा ब्वाइज तर्पm २४ र गल्र्स तर्पm १२ गरि जम्मा ३६ वटा टिमहरूले भाग लिएको थियो ।
बजाज पल्सर पिपुल्स च्वाइस एवार्डमा मनोनित हुन सफल नेपालको राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिम क्याप्टेन तथा समृद्धि स्कुल÷कलेजको समृद्धि गोरिल्लाज बास्केटबल टिमको पनि क्याप्टेन सदिना श्रेष्ठलाई सहयोग गर्न तथा कोरोना महामारीको दौरानमा पनि युवाहरू स्वस्थ र सकारात्मक रहनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले यो प्रतियोगीता आयोजना गरिएको हो ।
यस प्रतियोगीताको ब्वाइजमा बि.एम.के. “सी” टिम प्रथम भयो भने उप–बिजेतामा पनि बि.एम.के. कै “बी” टिम रहेको थियो । यस्तै गरी गल्र्समा आयोजक समृद्धि स्कुलको टिम प्रथम भएको थियो भने टिम सबिनाले दोश्रो स्थान हातपार्न सफल भएको थियो । प्रतियोगीताको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरको उपाधि ब्वाइज तर्पm बि.एम.के. “सी” टिमका सोनम प्रयाग शेर्पा तथा गल्र्स तर्फ समृद्धि स्कुलका प्रेडिका महर्जनले जित्न सफल हुनु भएको थियो । फाइनल खेलको पश्चात विजयी टोलिका खेलाडीहरूलाई समृद्धि स्कुलका सि.ई.ओ तथा प्रिन्सीपल नरेश प्रसाद श्रेष्ठ, नेपालको राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिम क्याप्टेन सदिना श्रेष्ठ लगायत अन्य निर्देशकहरूले पनि मेडल, ट्र««फी र प्रमाणपत्र बितरण गर्नुभएको थियो । प्रतियोगीताको सम्पूर्ण संयोजन तथा व्यवस्थापन समृद्धि गोरिल्लाज (सिनियर टिम)ले गरेको थियो ।
Previous Previous post: ग्लोबल आइएमई बैंक र हेफर इन्टरनेशनलबीच मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्यमीहरुका लागि सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जासम्बन्धी सम्झौता
Next Next post: लोकतन्त्रमा कुनै खतरा छैन : प्रधानमन्त्री ओली